မြန်မာသည် ပဉ္စမမြောက် ဒုက္ခသည် အများဆုံး ထွက်ပေါ်ရာ နိုင်ငံဖြစ် | AAR - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
← ရခိုင်ပြည်အမျိုးသားကောင်စီမှ လူထုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ	ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့ အထိမ်းအမှတ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ် →	မြန်မာသည် ပဉ္စမမြောက် ဒုက္ခသည် အများဆုံး ထွက်ပေါ်ရာ နိုင်ငံဖြစ်	Jun 20
ဇွန်လ (၂၀) ရက်နေ့၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်
ပြည်တွင်း ပဋိပက္ခ မငြိမ်သက်မှုများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒုက္ခသည် ၄၁၅၇၀၀ ခန့် နိုင်ငံမှ စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးကြပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပဉ္စမမြောက် ဒုက္ခသည် အများဆုံး ထွက်ပေါ်ရာ နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ၏ ယနေ့ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာ တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဘင်္ဂလော့ဒေ့ရှ် နိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်မထားသည့် မြန်မာဒုက္ခသည် ၂ သိန်းခန့် ရှိနေပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ အတွင်းရှိ နိုင်ငံမဲ့ ၅ သိန်း ၄ သောင်းခန့်အနက် အများစုမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂက ခန့်မှန်းထားသည်။ UNHCR ၏ ထုတ်ပြန် ချက်အရ ဒုက္ခသည် အများဆုံး ထွက်ပေါ်ရာ နိုင်ငံများမှာ ပါကစ္စတန်၊ အီရန်၊ ဆီးရီးယားနှင့် ကွန်ဂို တို့ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေး အခက်အခဲကြောင့်လည်း ဒုက္ခသည် အဖြစ် နိုင်ငံကို စွန့်ခွာမှုများလည်း ရှိနေသည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြသည်။
Posted on June 20, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.	← ရခိုင်ပြည်အမျိုးသားကောင်စီမှ လူထုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ	ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့ အထိမ်းအမှတ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ် →	Leaveacomment